Amisom oo bur burisay darbiga Warshadii dharka Degmada Balcad | Baydhabo Online
Amisom oo bur burisay darbiga Warshadii dharka Degmada Balcad
Ciidamada Midowga Afrika Amisom, ayaa lagu soo waramayaa inay bur buriyeen darbiga dhismaha qadiimiga ah ee Warshadii Dharka Degmada Balcad oo shaqeyn jirtay xilligii dowladii dhexe. Kolonyo ka tirsan ciidamada Amisom oo maraayay meel ku dhaw dhismaha Warshadii dharka Degmada Balcad, ayaa gaari ka mid ah Kolonyada Amisom, wuxuu ku dhacay darbiga Warshada, wuxuuna bur buriyay qayb ka mid ah darbigaasi.
Ciidanka Amisom ayaa intaas kadib diiday in ay la hadlaan shaqaalaha Warshadda ku sugan oo muddo gacanta ku haayay,waxa ay sidoo kale diideen in ay la hadlaan Maamulka Degmada Balcad, sidaas ayeyna ku baxsadeen.
Nin ka mid ah dadka gacanta ku haya Warshadii hore dharka Degmada Balcad oo la hadlay Warbaahinta Mustaqbal, ayaa sheegay in Amisom ay bur buriyeen illaa 10-Mitir oo ka mid ah darbiga Warshada dharka Degmada Balcad.
Shaqaalaha Warshadda dharka Balcad ayaa dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle ugu baaqay in ay arrintaas wax ka qabtaan Amisomna, lagala xisaabtamo falka ay ku kacday ee ah inay bur burisay dhismaha darbiga Warshadii dharka Degmada Balcad.
Ciidanka Amisom ayaa maalmahan caadeystay in ay cararaan marka ay shil gaystaan, waxaana ugu dambeeyay wiil Dhallinyaro ah oo dhawaan ay ku jiireen Isgoyska Sanca iyaga oo baxsadayna ay dad shacab ah ku celiyeen Isgoyska Siinaay,halkaas oo lagu xitray wadihii gaariga illaa haddana ku jiro Xabsiga dhexe ee Xamar.